ရုပ်ရှင်လောကသားတွေရဲ့သားသမီးတွေ ကျောင်းအပ်တဲ့ရင်အထောက်အပံ့ဖြစ်အောင်စာအုပ်တွေလှူဒါန်းတဲ့ ​ပြေတီဦး
လွန်​ခဲ့တဲ့ နှစ်​​​တွေကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးနေရာကနေ ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ မင်းသားပြေတီဦးကတော့ မိသားစုကိုလည်း အချိန်​​ပေးရင်း သရုပ်​​ဆောင်​အလုပ်​​တွေလုပ်​​နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလှူအတန်းဆိုရင် လက်မနှေးတဲ့ ပြေတီဦးကတော့ ချစ်ဇနီးချောလေး အိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့အတူ အလှူအတန်းတွေလည်း ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
လတ်တလောမှာတော့ ပြေတီဦးက သူတို့ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီး လုပ်ဖြစ်တဲ့ အလှူလေးအကြောင်းကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ​ဝေမျှ​ပေးထားတာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ အရမ်းကို ကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့ အလှူလေးမို့ ပရိသတ်တွေကို ကြည်နူးမှုတွေ ကူးစက်စေခဲ့ပါတယ်နော်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အရမ်းကို ကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့ ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အလှူလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပြေတီဦးကတော့ ‘ဒီနေ့မနက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ အလှူလေးတွေလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…ပထမနေရာက ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးပါ..ရုပ်ရှင်လောကသားတွေရဲ့သားသမီးလေးတွေ ကျောင်းအပ်တဲ့အခါ အထောက်အပံ့လေးဖြစ်အောင် ကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ် ၃၀၀ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်..ဒုတိယကတော့ မြန်မာအမျိုးသမီးများဖွိ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းပါ..
ဝင်္ကပါလမ်းထဲမှာရှိပါတယ်..တနိုင်ငံလုံးက ကျွန်တော်တို့ ရဲ့သားချင်း အခက်အခဲရှိနေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးများကိုစနစ်တကျ ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့နေရာလေးပါ..နေရာနဲ့ အဆောက်အဦးကြီးကကောင်းပေမယ့် ရန်ပုံငွေမလုံလောက်လို့ အဲဒီက ဆရာမကြီးက ရွှေကျောင်းပြောင်ပြောင် ဝမ်းခေါင်ခေါင်ဖြစ်နေရတယ်လို့ပြောတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်.
.နောက်တခါ မိသားစုနဲ့အတူ သွားလှူဦးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်မိသလို အမျိုးတို့ကိုလည်း ကြုံကြိုက်တဲ့အခါ သွားလှူဒါန်းပေးကြပါလို့လည်း တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ဆိုပြီး သူ့ရဲ့အလှူလေးကို ဝေမျှပေးထားတာပါ။
သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးကတော့ လတ်တလောမှာ အနုပညာအလုပ်တွေ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီး မိသားစုကိုလည်း အချိန်ပေးရင်း ဘဝကို အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနေတာပါ။ ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကတော့ အမြဲလိုလို ပရိသတ်ကိုရှေ့တန်းတင်ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေတာကြောင့် တစ်နေ့တစ်ခြား အောင်မြင်မှုတွေ တိုးတိုးလာတာဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေးနဲ့ သမီးလေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ အမြဲလိုလို ပျော်ရွှင်နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း ပြေတီဦးတို့မိသားစုရဲ့ ဝမ်း​မြောက်​ဖွယ်​အလှူကို သာဓု​ခေါ်လိုက်​ကြပါဦး​နော်။
လှနျခဲ့တဲ့ နှဈတှကေတညျးက မွနျမာနိုငျငံရဲ့ထိပျတနျးသရုပျဆောငျတဈဦးနရောကနေ ရပျတညျနနေိုငျတဲ့ မငျးသားပွတေီဦးကတော့ မိသားစုကိုလညျး အခြိနျပေးရငျး သရုပျဆောငျအလုပျတှလေုပျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ အလှူအတနျးဆိုရငျ လကျမနှေးတဲ့ ပွတေီဦးကတော့ ခဈြဇနီးခြောလေး အိန်ဒွာကြျောဇငျနဲ့အတူ အလှူအတနျးတှလေညျး ပွုလုပျလရှေိ့ပါတယျ။
လတျတလောမှာတော့ ပွတေီဦးက သူတို့ရဲ့ဖောငျဒေးရှငျးကနပွေီး လုပျဖွဈတဲ့ အလှူလေးအကွောငျးကို လူမှုကှနျယကျမှာ ဝမြှေပေးထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ အရမျးကို ကွညျနူးဖို့ကောငျးတဲ့ အလှူလေးမို့ ပရိသတျတှကေို ကွညျနူးမှုတှေ ကူးစကျစခေဲ့ပါတယျနျော။
ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ အရမျးကို ကွညျနူးဖို့ကောငျးတဲ့ ပွတေီဦးဖောငျဒေးရှငျးရဲ့အလှူလေးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ပွတေီဦးကတော့ ‘ဒီနမေ့နကျ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ပညာရေးဖောငျဒေးရှငျးအနနေဲ့ အလှူလေးတှလေုပျဖွဈခဲ့ပါတယျ…ပထမနရောက ရုပျရှငျအစညျးအရုံးပါ..ရုပျရှငျလောကသားတှရေဲ့သားသမီးလေးတှေ ကြောငျးအပျတဲ့အခါ အထောကျအပံ့လေးဖွဈအောငျ ကြောငျးသုံးဗလာစာအုပျ ၃၀၀ လှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ..ဒုတိယကတော့ မွနျမာအမြိုးသမီးမြားဖှိ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအသငျးပါ..
ဝင်ျကပါလမျးထဲမှာရှိပါတယျ..တနိုငျငံလုံးက ကြှနျတျောတို့ ရဲ့သားခငျြး အခကျအခဲရှိနတေဲ့ မွနျမာအမြိုးသမီးမြားကိုစနဈတကြ ပွုစုစောငျ့ရှောကျပေးနတေဲ့နရောလေးပါ..နရောနဲ့ အဆောကျအဦးကွီးကကောငျးပမေယျ့ ရနျပုံငှမေလုံလောကျလို့ အဲဒီက ဆရာမကွီးက ရှကြေောငျးပွောငျပွောငျ ဝမျးခေါငျခေါငျဖွဈနရေတယျလို့ပွောတော့ စိတျမကောငျးဖွဈမိပါတယျ.
.နောကျတခါ မိသားစုနဲ့အတူ သှားလှူဦးမယျဆိုတဲ့စိတျဖွဈမိသလို အမြိုးတို့ကိုလညျး ကွုံကွိုကျတဲ့အခါ သှားလှူဒါနျးပေးကွပါလို့လညျး တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ ဆိုပွီး သူ့ရဲ့အလှူလေးကို ဝမြှေပေးထားတာပါ။
သရုပျဆောငျ ပွတေီဦးကတော့ လတျတလောမှာ အနုပညာအလုပျတှေ ဆကျတိုကျပွုလုပျဖွဈနတောဖွဈပွီး မိသားစုကိုလညျး အခြိနျပေးရငျး ဘဝကို အေးခမျြးစှာ ဖွတျသနျးနတောပါ။ ပွတေီဦးနဲ့ အိန်ဒွာကြျောဇငျတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးကတော့ အမွဲလိုလို ပရိသတျကိုရှတေ့နျးတငျပွီး အနုပညာအလုပျတှလေုပျကိုငျနတောကွောငျ့ တဈနတေ့ဈခွား အောငျမွငျမှုတှေ တိုးတိုးလာတာဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။
ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သားလေးနဲ့ သမီးလေးကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ သူတို့ဇနီးမောငျနှံကတော့ အမွဲလိုလို ပြျောရှငျနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှလေညျး ပွတေီဦးတို့မိသားစုရဲ့ ဝမျးမွောကျဖှယျအလှူကို သာဓုချေါလိုကျကွပါဦးနျော။